UKomphela noma u-Igesund? | IOL Isolezwe
UKomphela noma u-Igesund?
NGEMUVA kokuphothula inhlolokhono yabaqeqeshi abahlanu abebegaqele isikhundla sokuqeqesha iBafana Bafana iSafa ikhiphe isitatimende izolo lapho iqinisekise khona ukuthi umjaho usuphakathi kukaGordon Igesund noSteve Komphela (osesithombeni).
Inhlolokhono eqale ngesonto eledlule ibibandakanya u-Igesund weMoroka Swallows, Komphela osabambile kuBafana, Neil Tovey weThanda Royal Zulu, Shakes Mashaba we-Under 23 noGavin Hunt weSuper Sport United.
Ngokwesitatimende esikhishwe yiSafa ngemuva kokuhlaba uKomphela ngemibuzo izolo kuhlaluke ukuthi uyena lo mqeqeshi no-Igesund abahambe phambili ngamaphuzu kanti sebemenyiwe ukuthi bazophinde benze ezinye izethulo kwiNational Executive Committee (NEC) yeSafa okuyiyona ezoqoka umqeqeshi weBafana.
Lokhu kuzokwenzeka ngoJuni 30 kanti ngemuva kwalokho iNEC izokwemukela umbiko weTechnical Committee bese iqedela ukuqokwa komqeqeshi omusha weBafana kulaba abasele ababili.
“Sijabula kakhulu ngokuthi le nqubo seyizofika emaphethelweni,” kusho isikhulu esiphezulu seSafa uRobin Petersen.
“Bobabili laba baqeqeshi bakhombise ukuthi bavuthiwe impela futhi bangakwazi ukuyibamba ishisa kuBafana Bafana.”
UPetersen uphinde wabonga uHunt, Mashaba noTovey ngokuba yingxenye yale nhlokhono.
Akwaziwa ukuthi yimuphi ozogcina ephumelele ngoba bobabili uSteve noGordon banamava abambekayo uma kukhulunywa ngokuqeqesha.
Nokho iningi labalandeli bebhola kuleli lithwele ngeqoma u-Igesund elimbona umfanele lo msebenzi njengoba eseke wadla isicoco seligi namaqembu amahlanu ehlukene kuleli.
Naye lo mqeqeshi useke wakuveza ukuthi angakwazi ukuyibamba ishisa kwiBafana uma engalinikwa ithuba.
Ngakolunye uhlangothi uKomphela angazigqaja aphinde azishaye isifuba ngokuthi ufike noshintsho olwenze iBafana yawina okokuqala kusukela ngo-Agasti nyakenye lapho yashaya iBurkina Faso eyayingaphelele kowobungani.
IGabon ibibophele iqembu lika-Under 23 elilungiselela ama-Olympics London kodwa kwehle kahle kuBafana ukuyishaya ngo 3-0 ngemuva kokuhluleka ukuwina isikhathi eside.